आफ्नो स्वास्थको नम्बर जानौ !! मुटुरोग बारे थाहपाई राखौ!! | Nepalese Heart Foundation UK
Charity Reg No. 1117380
Home » आफ्नो स्वास्थको नम्बर जानौ !! मुटुरोग बारे थाहपाई राखौ!!
Invitation for Heart Awareness Programme on 1st March 2015
Nepalese Heart Foundation is organising heart awareness programme together with Nepalese Blood... more»
लन्डन । बेलायतवासी नेपालीहरुलाई... more»
http://annapurnapost.com/News.aspx/story/1258 सञ्‍चारकर्मी... more»
सेप्टेम्बेर २९ विश्व मुटु दिवस हो।... more»
आफ्नो स्वास्थको नम्बर जानौ!!! मुटुरोग बारे थाहपाई राखौ।।
कार्डियोभास्कुलर रोग (Cardiovascular Disease) भनेको... more»
आफ्नो स्वास्थको नम्बर जानौ !! मुटुरोग बारे थाहपाई राखौ!!
कार्डियोभास्कुलर रोग (Cardiovascular Disease) भनेको के हो ?
कार्डियोभास्कुलर रोगलाई Heart and circulatory disease पनि भनिन्छ । यसको माने मुटु र सञ्चार सम्बन्धी सवै रोगहरू जस्तै कोरोनरी मुटुरोग (एन्जाइना र हृदयघात) र स्ट्रोक पर्दछन् । कार्डियोभास्कुलर रोग बेलायतको सवैभन्दा बढी मान्छे मर्ने रोग हो, यसको कारणले ३ जनामा एक जना मर्दछन् ।
कोरोनरी मुटु रोग (Coronary Heart disease) मुटु एउटा मांसपेशी हो र यो करिव हाम्रो मुठ्ठी जत्रो हुन्छ । यो करिव एक मिनेटमा ७० पल्ट धड्कन्छ र शरीरभरी रगत पम्प गर्दछ ।
जब मुटुले रगत छोड्छ, यो फोक्सोमा जान्छ जहाँ अक्सिजन लिन्छ । अक्सिजनयुक्त रगत मुटुमा फर्कन्छ र त्यसपछि आर्टरीहरूको माध्यमद्वारा शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा अक्सिजन पम्प गर्दछ । रगत त्यसपछि नसाहरु (veins) द्वारा मुटुमा फर्कन्छ र पुन फोक्सोमा पम्प गरेर पठाइन्छ । यसलाई सञ्चार भनिन्छ । मांशपेशीले आफ्नै रगतको आपूर्ति कोरोनरी आर्टरीहरूबाट पाउदछ । यिनीहरू मुटुको सतहका रक्तकोशिका हरू हुन् ।
कोरोनरी मुटुरोग भनेको के हो ?
कोरोनरी आर्टरीहरूको काम रगत र अक्सिजन मुटुको मांसपेशी (Heart muscle) लाई आपूर्ति गर्नु हो । कोरोनरी मुटुरोग तब हुन्छ जब कोरोनरी आर्टरीहरूका भित्ताहरू मा विस्तार विस्तार चिल्लो जम्मा भइ साँघुरो बनाइन्छ । यो अवस्था लाई आर्थलोसोलोशिस (Atherosclerosis) भनिन्छ र चिल्लो जम्मा भएकोलाइ आर्थोरोमा (Atheroma) भनिन्छ ।
समयमा आर्टरी यति साँघुरो बन्छ कि यसले चाहिएको बेलामा मुटुको मांसपेसीमा अक्सिजनयुक्त रगत (जस्तो व्यायाम गर्दामा) पठाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा मुटुमा पिडा हुन्छ । यही दुखाइ या असजिलो हुनुको कारणलाई एन्जाइना (Angina) भनिन्छ ।
जव आर्थोरोमा अस्थिर बन्न पुग्छ, यो टुट्नसक्छ र रगत जम्ने (Blood clot) हुनसक्ने बनाउनसक्छ । यदि रगत जमेको (Blood clot)ले कोटोनरी आर्टरी बन्द (Block) गर्छ भने मुटुको मांसपेशी अक्सिजन र रगत नपाएर त्यसै रहन्छ (strave) र सधैको लागि नोक्सान हुन सक्छ । यसलाई हृदयघात भनिन्छ । हृदयघातको अवधिमा जीबन नै जोखिम हुन मुटुका रिदमहरु को विकास हुन सक्छ । त्यसैकारणले हृदयघातलाई मेडिकल अकास्मात को रूपमा उपचार गरिन्छ ।
मुटुरोगका जोखिमका तत्वहरू र जीवनशैली
मुटुको रोग लाग्ने कुनै एउटा मात्र कारण छैन तर हामीलाई थाह छ कि केही तत्वहरूले मुटुको रोग लाग्ने सम्भावना बढाउँदछ । तल भनिएका विभिन्न जोखिमहरूले नै मुटुरोग लाग्छ । यसबाट बच्न आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
परिवारमा कोरोनरी मुटु रोग को इतिहास
वजन बढी हुनु
उच्च रगत कोलेस्ट्रोल (रगतमा बढी चिल्लो, (Hyperlipidaemia)
तल भनिएका कुराहरुलाई ध्यान दिएमा मुटुरोग बाट बच्न या साबधान हुन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
१) मुटुरोगका जोखिमका तत्वहरुमाथि ध्यान दियौ, कोलेस्ट्रोल, रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा, आफ्नो तौल जस्ताको आफ्नो नम्बर जानौ। यसअनुसार जीबंनशैली बदलौ।
२) दिनमा ६ ग्राम भन्दा कम नुन खाऔं ।
३) दिनमा घटिमा ५ पोर्सन फलफूल र सब्जी खाऔँ
४) ब्यायाम गरौँ र क्रियाशील होऔँ
५) मदिरा सावधानी पूर्वक तोकिएको परिणाम मात्र पिऔँ ।
६) जरुरी भए वजन घटाऔँ
७) धूमपान त्यागौँ
८) चिल्लो कम खाऔँ Saturated fat लाई धेरै कम गरौँ ।
९) चिन्तालाई समयमा कम गरौँ ।
१०) यदि मुटुरोगका जोखिमका तत्वहरु बढ्छ भने अरू जीवनशैली र खानामा प्रयत्न गरौ र डाक्टरलाई भेटौँ ।
यस सस्थाले सबैलाई ूआफ्नो नम्बर जानौ ू भन्ने आग्रह गर्दछ । तपाइलाइ आफ्नो नाम, ठेगाना थाह भएजस्तै तपाइले आफ्नो कोलेस्ट्रोल, रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्राको नम्बर थाह पाउनुस। बर्षमा घटीमा एकपल्ट रगत जाच्नुहोस। यसले कोरोनरि मुटुरोग बाट बच्न या साबधान हुन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। बेलायतमा त स्वाथ्य सेवा निशुल्क छ, आफ्नो अधिकार पर्योग गरौ र मुटुरोग सम्बन्धि जानाकारी राखौ।यदि यहाहरु लाइ मुटुरोग सम्बन्धि कुनै जानाकारी , सल्लाह, सहयोग चाहिएमा, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। आउनुहोस हामि सबै एक भएर मुटुरोग सम्बन्धि चेतना फैलाऔ। मुटुरोगबाट पिडित लाई आफ्नो सामन्य जीबन यापन गर्न उत्साही बनाऔ।
समयमा जनाकारी लिइ सतर्कता अपनाऔ!!!
मुटुरोग बाट बच्न बचाउन समयमा नै ध्यान दियौ!!!
All Rights Reserved © 2014 Nepalese Heart Foundation UK.